वर्तमान नेकपाको सरकारलाई समेत संसफो र राजपा दुबैको समर्थन प्राप्त छ । भन्नलाई त दुइतिहाईको सरकारको यो सरकार सम्विधान संशोधन गर्न सक्षम रहेकोले यसै कारण समर्थन दिएको हो भनिन्छ । तर यी राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्ति हेर्दा आन्दोलनको एजेन्डाभन्दा लेनिदेनीमा बढी व्यस्त देखिन्छन् । यसरी राजपाका नेताहरु एउटा कुनै ठोस विचार र एजेन्डाभन्दा पनि नेका र नेकपाका नेताहरुको नजिक रहेको चर्चा मिडियामा सुनिने गरिन्छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र तरवार तानातानको स्थिति छ । वृद्ध नेता महन्थठाकुरलाई संयोजकको पदबाट हटाएर पार्टीको नेतृत्वलाई चक्रिय प्रणालीमा लगेर हाल राजेन्द्र महतोले पार्टीको कमान सम्हालेपछि यो स्थिति उत्पन्न भएको हो । अझ दुइदिन पहिले अध्यक्षमण्डलका एकजना नेता महेन्द्ररायले एउटा अन्तरवार्ताको क्रममा महन्थठाकुरलाई काम नलाग्ने, मनोमानीपूर्ण ढङ्गले पार्टीभित्र नियुक्ति गरिरहेको र आफूखुशी पार्टी चलाईरहेको आरोप लगाएपछि राजपाभित्रको विवाद झन् तिखो हुँंदै गएको देखिन्छ । हुन त वर्तमान संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा जारी राख्ने भन्ने सवालमा महतोगूट र ठाकुरगूटमा विवाद यसपटकको दशैँं देखि नै देखिँंदै आएको हो । सम्विधान संशोधनको वचनबद्धतामा सरकारलाई समर्थन दिएको, तर सरकारले आफैले दिएको समयसीमा उल्लङधन गर्दै गएकोले छठपछि समर्थन फिर्ता लिइने कुरा ठाकुरगूटका शक्तिशाली नेता वृषेशचन्द्र लाल र स्वयं ठाकुरले मिडियामा भनेका थिए । तर त्यसको विपरीत राजपाका वर्तमान संयोजक महतो र उनका नेताहरुले पार्टीभित्र यसप्रकारको कुनै निर्णय नभएको भनेर तत्कालै ठाकुरगूटको खण्डन गरेका थिए । छवटा ठूला–साना घटकहरु मिलेर बनेको राजपामा राजेन्द्रमहतोको सदभावनागूट र महन्थठाकुरको तराईमधेश लोकतान्त्रिक (तमलोपा) शक्तिशाली समूहहरु छन् भने अन्य शरदसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय, अनिल झा र राजकिशोर यादवको साना गूटहरु छन् । राजपामा स्थापनाकाल देखिनै पार्टीमाथी वर्चस्वको निम्ति महतो र ठाकुरगूट बीचको दाउपेँंचको स्थिति रहँंदै आएको हो । तर राजपाभित्र बौद्धिक वृद्ध नेताको प्रभावबनाएको महन्थठाकुर पार्टी स्थापनाकालमा तुलोको डन्डीको रुपमा रुपमा देखिए । यसमा उनको काँंग्रसी विगतको आदर्श भूमिकाले काम गरेको थियो । पार्टी एकीकृत रुपमा चलाउन एउटा जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न नेतृत्वको आवश्यकता हुन्छ । अध्यक्ष संगठनको सामूहिक अभिव्यक्ति हुन्छ, तर राजपाको गठन छवटा घटकहरु बाट भएको हो, र पार्टी स्थापनाकालमा कुनैपनि घटकका प्रमुखले आफूलाई दोयम मान्न तयार भएनन् । परिणामस्वरुप पार्टीमा छवटै घटकका प्रमुख रहनेगरि अध्यक्षमण्डलको अवधारणा राखियो । र राष्ट्रिय अधिवेशनबाट अन्तिम निक्र्यौल गर्नेगरि तत्काललाई महन्थठाकुरलाई अध्यक्षमण्डलको संयोजक स्वीकार गरियो । राजपा कानूनीरुपमा पार्टी भएपनि त्यसपार्टीका शीर्षनेताहरुको प्रवृत्ति हेर्दा यस्ले राजनीतिक पार्टीको रुप लिन अझै समयलाग्ने देखिन्छ । यस्को कारण हो, राजपाका नेताहरुबीचको गैरवैचारिक र निजीस्वार्थपरक विवादहरु । राजपा मधेश आन्दोलनबाट विकसित पार्टी हो । नेपाली काँंग्रेस, एमाले, र सदभावना पार्टीलगायतका पार्टीहरुमा राजनीतिक अवसरको खोजीमा रहेका मधेशी क्यारियरिस्टहरुको निम्ति मधेश आन्दोलन जबर्दस्त अवसर साबित भयो । मधेश आन्दोलनले यिनीहरुलाई एकठाउँंमा जम्मा हुने अवसर दियो । पृष्ठभूमिमा अन्तरकथा जे रहेपनि गजेन्द्रनारायण सिंहको परम्पराबाट निस्केका अनिलझा र राजेन्द्रमहतो, एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका महेन्द्रराय, नेपाली काँंग्रेसबाट उपेक्षित भएर महन्थ ठाकुर, राप्रपा–काँंग्रेस पृष्ठभूमिका शरदसिंह भण्डारी र गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका राजकिशोर यादवले मधेश आन्दोलनको बेला आ–आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेका थिए । शुरुमा हाल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्रयादवको नेतृत्वमा तत्कालीन समयमा संयोजित मधेश जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन पछि विभाजित भयो । उपेन्द्रयादव हाल ससफोको अध्यक्षको रुपमा संघीय सरकारमा मन्त्रीसुख भोग्दैछन् । यसै मध्येको एउटा घटक अनेक आरोह अवरोह पार गरेर हाल नेपाली काँंगे्रसमा विलय भइसकेको छ र यस घटकको नेता विजय गच्छेदार नेकामा उपसभापति मनोनित भएपनि हाल धर्मरमा छन् । मधेश आन्दोलनका बाँंकी रहेका घटकहरुले महन्थठाकुरको संयोजकत्वमा डेढवर्ष अगाडी राजपाको गठन गरेका हुन् । उपेन्द्रयादवको संसफो र राजपाले मिलेर प्रदेशनम्बर दुईमा मिलेर संसफो उपाध्यक्ष मो. लालबाबू राउत गद्दीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । तर राजपा गठनको डेढवर्ष पछि संयोजक महन्थठाकुरको यो रुखो बहिर्गमन र त्यसपछि पार्टीभित्र तात्तिँंदै गएको गूटबन्दीले प्रदेश सरकारको कामकाजसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यस पटक पार्टी नेतृत्वमा ठाकुरको संयोजक पदबाट बहिर्गमन र राजेन्द्रमहतोको दुइमहिने ताजपोशीको निर्णय बहुमतको आधारमा गरिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ । पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा टाइप गरिएको ।।।सहमति’ शब्दलाई केरेर ।।।बहुमतबाट’ भन्ने लेखिएको शब्दले पार्टीकेन्द्रको बैठकमा रहेको विवाद र तातोपनालाई स्पष्ट गर्दछ । राजपा एउटा पार्टीको रुपमा रहेपनि यसका नेताहरुमा रहेको अवसरवादी चरित्र विगतमा एकातिर आन्दोलनमा पनि रहनु र अर्कोतिर सरकारबनाउने बेला सबै एकजुट भएर केन्द्रमा सरकारमा समर्थन गरेको इतिहास रहँंदै आएको छ । यहाँं रोचक के छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरुको समर्थनबाट केन्द्रिय राजनीतिका तत्कालीन प्रमुखदल नेका, एमाले र माओवादी तीनवटैले सरकार बनाएका छन् । वर्तमान नेकपाको सरकारलाई समेत संसफो र राजपा दुबैको समर्थन प्राप्त छ । भन्नलाई त दुइतिहाईको सरकारको यो सरकार सम्विधान संशोधन गर्न सक्षम रहेकोले यसै कारण समर्थन दिएको हो भनिन्छ । तर यी राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्ति हेर्दा आन्दोलनको एजेन्डाभन्दा लेनिदेनीमा बढी व्यस्त देखिन्छन् । यसरी राजपाका नेताहरु एउटा कुनै ठोस विचार र एजेन्डाभन्दा पनि नेका र नेकपाका नेताहरुको नजिक रहेको चर्चा मिडियामा सुनिने गरिन्छ । विचारधारात्मकरुपमा हेर्ने हो भने महन्थठाकुर नजिकका नेताहरुमा काँंग्रेसी विगत भएकाहरु बढी छन् भने राजेन्द्रमहतो माथी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग हार्दिकता बढी भएको भनिन्छ । संसदीय निर्वाचनको बेला त यसबारे हावा नै चलाइएको थियो । यस पटक नेकपा सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएपछि उनलाई ओली नजिक भएको भन्नेहरु लाई बल मिल्ने छ । महन्थ ठाकुरले संघीय सरकारबाट समर्थन फिर्तालिने कुरा गरेको कारण नै उनको बहिर्गमन भएको हो भन्नेहरुको पनि कमी छैन । जहाँंसम्म राजपाभित्रको यस ताजा विवादको प्रत्यक्ष कुरा हो, आगत राष्ट्रिय अधिवेशनमा पार्टीमाथी कसरी वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने हो । संयोजक मनोनयन भएपछि ठाकुरले आफूखुशी पार्टीको महत्वपूर्ण स्थानमा नियुक्ति गर्दै गइरहेका थिए, भने एक्ले देशमा भ्रमण गर्दै जिल्लाहरुमा समेत आफ्नै हिसाबले कमिटीहरु गठन गर्दैगइरहेका थिए । अध्यक्षमण्डलका अन्य सदस्यहरुको उपेक्षा र आफ्ना मानिसहरुलाई पार्टी कमिटीमा प्रोत्साहित गर्दै लगेको देखेपछि राजेन्द्रमहतो सहित अन्य घटकहरु आशंकित हुँंदैगएको धारणापनि व्यक्त गरिन्छ । यसपटकको विवादमा अनिलझा महन्थठाकुरको पक्षमा छन् भने बाँंकी राजेन्द्रमहतोको पक्षमा छन् । यस विवादको तिव्रता यसैबाट बुझ्नसकिन्छ कि पार्टीभित्र महन्थठाकुरले गरेका सबै निर्णयहरु एकमुष्ट खारेज गरिएका छन् । यसले राजपामा विवाद झन् झन् चुलिँंदैजाने सम्भावना देखिन्छ । स्वाभाविकरुपमै यसको प्रभाव प्रदेशसरकारमा पनि पर्नेछ, जहाँं संसफो र राजपा संयुक्तरुपमा सरकार चलाईरहेको छ । संसफो अध्यक्ष उपेन्द्रयादवले आफ्नो पाटीभित्र करिब करिब एकल वर्चस्व स्थापित गरिसकेका छन् । पार्टीमा अन्य नेताहरु भएपनि उनको निर्णय अवज्ञा गर्ने स्थितिमा कोही छैन । तर राजपासंगको संगतमा भने महन्थठाकुर संग उनको व्यक्तित्वको टकराहट भने विगतमा देखिँंदैआएको छ । मधेश आन्दोलनका यी दुई नेता व्यक्तित्वको टकराहटकै कारण एकठाउँंमा अँंटाउन नसकेको भन्नेहरु पनि छन् । यद्यपि यी दुई नेताहरु दुईभिन्न वैचारिक स्कूलबाट आएकोलाई पनि केहीले कारणको रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । यी दुई पार्टीहरुको यो स्थिति रहेपनि प्रदेशको निर्वाचनले सरकार बनाउन दुबै पार्टीलाई एकठाउँंमा आउन बाध्य बनाइदियो । नेपाली काँंग्रेस वा तत्कालीन एमाले–माओवादीसंग मिलेर सरकार बनाउँंदा आन्दोलनको एजेन्डा र मधेशी जनताको आक्रोश खेप्नु पर्ने, र संसदीय राजनीतिमा मोल घट्ने कुरा उनिहरुले बुझे । र ठिक्क बहुमतको संयुक्त सरकार बनाए । प्रदेश सरकारको स्थिति कति सम्वेदनशील छ भने एक–दुई जनाले पनि फ्लोर क्रस गरिदिए भने यो सरकार ढल्न सक्छ । तै सम्विधानले दुई वर्षभित्र सरकार ढाल्न नपाउने वैधानिक व्यवस्था गरेको ले यस सरकारलाई हाल साँंस फेर्ने मौका दिएको छ । अब यो सरकार दोस्रो वर्षमा छ र संसदीय राजनीतिमा प्रायः देखिने सरकार ढाल्ने र बनाउने अवसरवादीहरुको प्रिय खेल शुरु हुनसक्छ । प्रदेश सरकारमा संसफो र राजपाले संयुक्त सरकार चलाएपनि दुईपार्टी बीचको सम्बन्धभने रुखो रहेको पटक पटक सतहमा देखिने गरेको छ । जहाँंसम्म संसदीय राजनीतिभित्र यी दुई पार्टीहरुको अवस्थितिको कुरा छ, राजेन्द्रमहतो जस्तै उपेन्द्रयादवपनि नेपाली राजनीतिमा सर्वाधक अविश्वनीय कार्ड हुन् । तर हाल उनि नेकपाको दुइतिहाई सरकारसंग छन् । त्यसैले अहिले उनको सदभाव नेकपा सरकारसंग छ भन्दा अत्युक्ति न होला । प्रदेशमा उनको उपाध्यक्ष मूख्यमन्त्री राउत भावनात्मकरुपमा राजपा नजिक देखिन्छन् । यसले निश्चितरुपमा अध्यक्ष उपेन्द्रयादवलाई अप्ठ्यारो पारेको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ राजपाको दुईतर्फी स्थितिबारे माथी नै चर्चा गरियो । त्यसो भए महन्थठाकुरको बहिर्गमन र महतोको ताजपोशीले प्रदेश सरकारको स्वरुपलाई पनि असर पार्नेछ त ? अहिले केही भन्नु हतार हुनेछ । तथापि सम्भावनाका सबै द्वारहरु खुलेका छन् भन्दा अनुचित न होला । र तपाँंईले कुनै चलचित्र हेर्दा सम्भावनाले त आकर्षण बढाउँंने गर्छ । वर्तमानको राजनीति आमजनताको निम्ति खासै महत्व राख्दैन । त्यसैले यसलाई कुनै तिव्रगतिको चलचित्र जस्तै हेर्नुस र सम्भावनाको आनन्द लिनुस ।